GUDOOMIYAHA DEGMADA XARIIRAD OO KA XOG-WARAMAY WAXYAABIHII U QABSOOMEY | Dhamays Media Group
GUDOOMIYAHA DEGMADA XARIIRAD OO KA XOG-WARAMAY WAXYAABIHII U QABSOOMEY
Hargaysa, January-07-2018 (dhamaysnews.com) Gudoomiyaha degmada xariirad ee gobolka selel Md. Ilyaas Xasan Axmed oo aan waraysi la yeelanay ayaa xog-waran naga siiyey xaalada degmada iyo waxyaabaha ay ka qabteen arrimaha bulshada ee degmadaasi.
Gudoomiyuhu waxa uu hadalkiisa ku bilaabay; guud ahaan degmada xaaladeedu way wanaagsan tahay haday tahay dhanka ammaanka iyo ta caafimaad ba. Si aan u gudano waajibaadka qaran ee na saaran waxan degmada ka qabanay intii aan joogay waxqabad balaadhan oo bulshadu ku diirsatay. Anaga oo kaashanayna hay’ada SCI waxan dedaal badan ka galay siddii biyo nadiif ah loogu heli lahaa si bulshada caafimaadkeeda iyo fayadhawrkeeda ba aan u ilaalino, sahankiina hadda wuu soo dhammaaday, sidaa darteed hay’adu waxay bilawday qodistii ceelka, Arrintaasina meel fiican bay maraysaa. Marka ceelka la dhammeeyana waxa la bilaabi doonaa sidii magaalada aan biyo gelin ugu samayn lahayn. Markii hore magaaladu waxay ka cabi jirtey ceelal gaagaaban kuwaasi oo milix badan leh, waxaanay biyahaasi sababi jireen caafimaad daro ay ka mid yihiin kelyo xanuun iyo dhibaatooyin caafimaad oo badan.
Waxa kale oo aan ku guuleysanay in aan markii ugu horeysay aan degmada u soo iibino gaadhi aan kaga shaqayn doono ururinta qashinka si aan u ilaalino fayadhawrka caafimaadka bulshada iyo hagaajinta arrimaha deegaanka. Waxa kale oo qorshaha dhow noogu jira siddii aan degmada ugu heli lahayn qorshe aan ku kala habaynayno magaalada, waxaanan u diyaarin doonaa hab casri ah oo u diyaarsan wadooyin iyo goobaha dhismayaashu noqonayaan si degmadu u noqoto caasimad habaysan.
Dhanka kale aniga iyo xafiiskayguba wax mushahar ah kama qaadano wasaaradda arrimaha gudaha wax kab ahna kama qaadano laakiin waxan wax ku qabsanaa hadba kharashka aan anagu ka degmo ahaan soo saarno. Markii hore hay’aduhu degmada may iman jirin sidaa darteed waxan ka shaqaynay siddii aan u xoojin lahayn dhanka nabadgalyada si aan u soo jiidano hay’adaha caalamiga ahi u yimaadaan degmada si ay u caawiyaan dadka tabaalaysan ee ku dhaqan degmada xariirad iyo hareereheeda. Waxa naga go’an in aan degmadan waxqabad muuqda ka qabano, sidaa darteed waxan bulshada iyo waxgaradka , cuqaasha, qurbe jooga iyo dhammaan bulsho weynta degmada xariirad u soo jeedinayaa in ay dhan uga soo wada jeestaan arrimaha horumarinta iyo nabadgalyada degmada xariirad si aan asaageen ula tartano.
Previous: Somaliland: Wasaarada Caafimaadka oo Deeq kala Wareegtay Turkiga
Next: Madaxweyne Biixi Oo Hadhimo-Sharafeed U Sameeyay 23 Suldaan Iyo 40 Chief Caaqil Oo Beesha GAR-XAJIS Ah